Lithium Iron Phosphate Battery ၏အားသာချက်များ - သတင်းများ - Shandong JINMA Technology Co. , Ltd ။
1. အခြားဘက်ထရီများ၊လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီအလွန်တိုးတက်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ lithium iron phosphate crystal တွင်ရှိသော PO bond သည်တည်ငြိမ်ပြီးပျက်စီးရန်ခက်ခဲသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန် (သို့) အလွန်အကျွံအားစိုက်သည့်အချိန်၌ပင်၎င်းသည်မပြိုကွဲဘဲ lithium cobalt oxide ကဲ့သို့အပူကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခိုင်ခံ့သောဓာတ်တိုးသောဓာတ်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ပြိုကွဲခြင်းအပူချိန်သည် ၆၀၀ ံခန့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လုံခြုံမှုရှိသည်။
၂. လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်ပြီး၊ မြင့်မားသောလျှပ်စီးအားဖြင့်မြင့်မားသော current သည် 2C အလျင်အမြန်အားသွင်းနိုင်ပြီးအထူးအားသွင်းစက်အောက်တွင် 1.5C အားသွင်းခြင်းသည်မိနစ် ၄၀ အတွင်းဘက်ထရီကိုပြည့်စေနိုင်သည်။ ဘက်ထရီဒီစွမ်းဆောင်ရည်မရှိကြပါဘူး။
3. လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်စွမ်းရည်ကြီးမားသည်။ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမှာ 40WH / kg ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှိအဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်သောလီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ၉၀WH / kg ထက်စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုရှိသည်။